Gareth Southgate Oo Raadinaya Tababare Si Gaar Ah Ugu Layliya - Axadle Wararka Maanta
Tababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate ma haysto waqti ku filan oo uu ku helo macallin khaas u ah weeraryahannada xulka qaranka, waxaana uu ka shaqaynayaa sidii ay ku heli lahaayeen qof si gaar ah u layliya ciyaartoydiisa afka hore inta aan la gaadhin tartanka Euro 2020 ee ay labada toddobaad ka hadhsan yihiin.
Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa shaqada ka caydhiyey Allan Russell oo muddo dheer ahaa tababaraha weeraryahannada xulka qaranka, kaas oo shaqadiisa waayey markii uu qirtay in walaalkii oo aan caymis ku jirin uu ogolaaday in gaadhiga uu u kexeeyo.
Russel ayaa galay shil baabuur isaga oo saaran qaybta rakaabka ee baabuurkiisa oo uu qof kale ku waday. Markii la baadhay ayaa waxa la ogaaday in walaalkii oo khamriyo-cab ahi uu baabuurka waday, sidaasna ay shilka ku galeen.
Struggle-saxaafadeed uu soo saaray xidhiidhka FA ayaa waxa uu ku sheegay in Allan ay isla qaateen, in labada dhinac ba ay u fiican tahay in uu ka tago shaqadii uu u hayay xulka qaranka ee ahayd latalinta iyo tababaridda weeraryahannada xulka.
Gareth Southgate oo la filayo in Salaasada ama Arbacada uu magacaabo liiska xulka qaranka England ee ka qayb-gelaya tartanka Euro 2020, ayaa ka walwalsan sidii uu ku heli lahaa tababare beddela Allan oo layliya weeraryahannada marka ay tababarka samaynayaan.
Xulka qaranka England ayaa toddobaadka hore tababarka qaadan doona iyadoo ay ka maqan yihiin ciyaaryahannada kooxaha Chelsea iyo Manchester Metropolis ee ciyaaraya finalka Champions League, kuwaas oo la filayo in laga soo qaadan doono oo ay xulka kaga jirayaan Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling, Phil Foden, Mason Mount, Ben Chilwell iyo Reece James.
Waxa kale oo ciyaartoydan la filayaa in qaarkood la siin doono fasax ay kaga maqnaadaan labada ciyaarood ee saaxiibtinimo ee Austria iyo Romania ee England iskugu diyaarinayso tartanka Euro 2020.
Howlgalka ayaa lagu qabqabtay qaar ka mid ah samafalayaasha ka howlgala magaalada Jowhar – Axadle